Naqshad cusub oo loogu talagalay 3D crystal USB Drive soosaarayaasha cabbirka aadka u khafiifka ah iyo alaab-qeybiyeyaasha | M-Boqoradda
Suunka Xarkaha Xarkaha leh
Naqshad cusub oo loogu talagalay 3D crystal USB Drive cabbirka khafiifka ah
Awoodda Kaydinta: Awoodda dhabta ah. USB flash flash-kani waa xalka dhamaan baahiyahaaga keydinta.
Waxqabadka USB 3.0 - Xawaaraha sare ee gudbinta xogta 3.0 wuxuu gaarsiisanyahay 80-120MB / s aqrinta iyo 15-30MB / s qoris. Badbaadso waqti dheeri ah wareejinta xogta iyo akhrinta faylasha.
Balaaris Balaaran– Bareesada oo Ciyaar. La jaan qaada USB 2.0 iyo gadaal. (Uma baahnid inaad rakibto wax barnaamij ah). Taageer Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8, Mac OS 9.X / Linux2.4 ama wixii ka sareeya.
• Awoodda Kaydinta: Awoodda dhabta ah. USB flash flash-kani waa xalka dhamaan baahiyahaaga keydinta.
• Waxqabadka USB 3.0 - Xawaaraha-xawaaraha sare ee gudbinta xogta 3.0 wuxuu gaarsiisanyahay 80-120MB / s aqrinta iyo 15-30MB / s qoris. Badbaadso waqti dheeri ah wareejinta xogta iyo akhrinta faylasha.
• Isku-qanacsanaanta Ballaaran-- Bareesada iyo Ciyaar. La jaan qaada USB 2.0 iyo gadaal. (Uma baahnid inaad rakibto wax barnaamij ah). Taageer Win98 / ME / 2000 / XP / Vista / win7 / win8, Mac OS 9.X / Linux2.4 ama wixii ka sareeya.
• La qaadan karo oo La waarin karo - Yar yar, oo jeebkiisu le'eg yahay si loogu qaado si fudud. Isticmaal qashin-A-fasal ah, waa la tirtiri karaa si isdaba-joog ah 100,0000 jeer. Taageer koronto kulul & Ciyaar. Isticmaalka Awoodda Hoose, kaydinta adag ee gobolka.
• Crystal Design and Box Elegant - Waxay u noqon kartaa hadiyad la yaab leh saaxiibbadaada iyo qoysaskaaga. Iftiinka salka ku haya jirka kareemka wuxuu joogi doonaa buluug marka la isticmaalayo. Hab wanaagsan oo lagu kala saaro miisaankaaga USB flash drives midba midka kale maaddaama USB-gaaga qurxoon uu ku yimaado kala duwanaansho kala duwan oo loo isticmaalo maalin kasta.
Hore: 16GB / 32GB qaabeyn loogu talagalay LED LOGO USB Drive
Xiga: Clips cusub USB Drive
16GB / 32GB qaabeyn loogu talagalay LED LOGO USB Drive
Pocket Power 10000 Xeedho Power Power Portable ...
M-queen Compact 2000mAh bangiga awoodda degdegga ah
Cabirka ugu yar adduunka PD 45W 60W Travel Ch ...
MQ-GP01 Magnetic Dual Charger oo loogu talagalay PS5 / XSX / Swi ...
Bangiga awooda hadiyadaha ee MQ-50S 5000mAh